भर्खरै सदिक्षाको फेसबूकमा भेटियो यस्तो (भिडियो हेर्नुस्) – Complete Nepali News Portal
भर्खरै सदिक्षाको फेसबूकमा भेटियो यस्तो (भिडियो हेर्नुस्)
मोरङ । उर्लाबारी नगरपालिका–५ का ३१ वर्षीय प्रविण बाँस्तोलको गत पुस ५ गते भएको मृ त्यु प्रकरणमा मृ त्यु वा ह त्याको कारण र संलग्न व्यक्तिसम्म प्रहरी नपुग्दै सामसुम हुनै लागेको थियो ।
तर जब मृतककी बहिनी दूर्गा बाँस्तोला ‘सदीक्षा’ले जनस्तरबाटै घटनाको छानबिन थालिन्, शंकास्पदहरू न्यायको कठघरासम्म पुगेका छन् । राज्यबाट अख्तियारप्राप्त प्रहरीले गर्न नसकेको काम पीडित परिवारकी एक युवतीले गर्न कसरी सम्भव भयो ? शंकास्पद आरोपीसम्म पुग्न सदीक्षाले प्रहरीलाई कसरी बाध्य पारिन्? यसका पछाडि सदीक्षाले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ ।
मृत ककी बहिनी सदीक्षाले दाजुको न्यायका लागि ईलाका प्रहरी कार्यालयमा गरेको संर्घष र देखाएको साहस पछिल्लो समयमा उदाहरणीय बनेको छ ।
यद्यपि, आजभोलि सदिच्छालाई सुरक्षामा थ्रेड भएको छ । उनका बारेमा अनर्गल प्रचार गर्दै अमेरिका जान सम्म रोक्ने प्रयास भै रहेको समाचार श्रोत बताउछ ।
पछिल्लो अपडेट बारे हामीले उनै सदिच्छासङ कुराकानि गरेका छौ ।